Mon, May 28, 2018 | 03:13:20 NST
केपी ओलीले गाई जोगाउँदा, प्रचण्डले हलो हराइदिए
काठमाडौं, मंसिर २५ – यसपटकको चुनावमा निकै रमाइला दृष्यहरु देखिए । केन्द्रीय तहमा एमाले, माओवादी जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल लगायत पार्टीको वाम गठबन्धन बनेको थियो । यस्तै नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक लगायतका दलको लोकतान्त्रिक गठबन्धन थियो ।
ओखलढुंगा, मंसिर २५ – ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद यज्ञराज सुनुवारले जिल्लाकै पहिलो जलविद्युत्का मोलुङ जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण प्रसारणको उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
अर्घाखाँची, मंसिर २५ – प्रतिनिधिसभामा एकसिट मात्रै रहेको अर्घाखाँचीमा माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी विजयी हुनुभएको छ । रायमाझीले ५० हजार ३ सय ८५ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो ।
काठमाडौ, मंसिर २५ – बुथ कब्जाको विवादपछि आइतबार मात्र मतगणना सुरु भएको स्याङ्जामा वाम गठबन्धन नै अगाडि देखिएको छ ।
ओखलढुंगा, मंसिर २५– ओखलढुंगामा समानुपातिक तर्फको मत गणना सम्पन्न भएको छ । संघ र प्रदेश दुवै तर्फको मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले पहिलो बनेको छ ।
गुल्मी, मंसिर २५ – नेकपा एमालेका सचिव एवम् गुल्मी क्षेत्र नं. १ का नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले देशमा वामपन्थीहरुको जित दुइतिहाईको नजिक पुगिसकेकाले अब पुसको पहिलो हप्ताभित्र वामपन्थी सरकार गठन हुने बताउनुभएको छ ।
जित्छु भनेर ढुक्क भएकी मञ्जु चौधरी कसरी हारीन्
काठमाडौं, मंसिर २५ – वाम गठबन्धनकी उदयपुर क्षेत्र नं को प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार मञ्जु चौधरीले आफु हार्छु भन्ने सोच्नु नै भएको थिएन । तर प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेससँग ५ सय ४८ मत अन्तरले हार व्यहोर्नु परेको खबर चौधरीले स्वीकार्नु परेको छ ।
बैतडी, मंसिर २५ – बैतडीमा समानुपातिक तर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा तर्फ सबैभन्दा बढी एमालेले २३ हजार ३२३ मत प्राप्त गरेको छ ।
तेह्रथुम, २५ मंसिर – कांग्रेस नेतृ सीता गुरुङले निर्वाचित एमाले नेता भवानीप्रसाद खापुङलाई बधाई दिनुभएको छ । समानुपातिक तर्फ सुरक्षित रहेको सीट छाडेर प्रत्यक्षतर्फ तेह्रथुमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सीता उम्मेदवार बन्नुभएको थियो ।
नवलपुरमा २ दशमलव ६ प्रतिशत मत बदर
नवलपरासी, मंसिर २५ – प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा नवलपुरमा प्रत्यक्षतर्फ २ दशमलव ६ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।
संखुवासभा, मंसिर २५ – संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यामा नेकपा एमालेका राजेन्द्र गौतम विजयी हुनु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका दीपक खड्कालाई १ हजार १ सय ३० मतले हराउँदै गौतम विजयी हुनुभएको हो ।
विपक्षीमा बसेर बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन्छौ – महामन्त्री कोइराला
नवलपरासी, २५ मंसिर– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित उम्मेदवार डाक्टर शशांक कोइरालाले आफूहरु विपक्षीमा बसेर बलियो रुपमा प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ ।
विजय पछि सुवालले भन्नुभयो–नेमकिपाको विजय पूर्वबाट घाम उदाए जस्तै हो
भक्तपुर, मंसिर २५ – भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट ३३ हजार ७६ मतसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल विजयी हुनुभएको छ ।
समानुपातिकमा कुन प्रदेशमा कुन पार्टीको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं, मंसिर २५ – प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई समानुपातिक मतपरिणाम भने दोस्रो स्थानमा पु¥याउने देखिएको छ ।
सरकारी जागिर छोडेर राजनीतिमा आएका रामेश्वर राय सांसद बने
सर्लाही, मंसिर २५ – सर्लाही ३ मा माओवादी केन्द्रका रामेश्वर राय यादव विजयी हुनुभएको छ ।
महोत्तरी, मंसिर २५ – महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ मा प्रतिनिधिसभा तर्फ संघीय समाजवादी फोरम विजयी भएको छ ।
प्रदेश नं. ३ : कहाँ कसले जिते ?
काठमाडौं, मंसिर २५ – प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लामा प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सबै क्षेत्रको नतिजा आएको छ ।
विनोद चौधरीले भने ‘कांग्रेसको एजेन्डालाई नागरिकले विश्वास गरे’
काठमाडौं, मंसिर २५ – नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उद्योगपती विनोद चौधरीले नवलपरासीका नागरिकले नेपाली कांग्रेसको एजेन्डालाई विश्वास गरेको बताउनुभएको छ ।
संघीय संविधानपछिको पहिलो संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस निकै पछाडि पर्‍यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस तेस्रो दल हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ नेपाली कांग्रेसले बढीमा २१ सिट भन्दा धेरै नजित्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।
सर्लाही, मंसिर २५ – सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ को मतगणनास्थल सर्लाही क्याम्पस मलंगवामा राजपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच ढुंगा हानाहान हुँदा केही घाईते भएका छन्
काठमाडौं, मंसिर २५ – यसपटकको चुनावमा धेरैको नजर प्यूठानतर्फ पनि थियो ।
संखुवासभा, मंसिर २५ – संखुवासभाको मत गणनाको काम अन्तीम चरणमा पुगेको छ । ६ वटा बाकसमा भएका मत गन्न बाँकी रहेकोले २ घण्टा भित्र मत गणनाको काम सकिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २५ – ‘जीवनबहादुर शाहीले पनि चुनाव नजितेको भए प्रदेश नं. ६ को १० जिल्लामा कांग्रेस शून्य नै हुन्थ्यो’ कांग्रेस वृत्तमा मात्र होइन, जीवनबहादुर शाही अहिले गैर कांग्रेस र चुनावको नतिजासँगै जोडिएर आउने चर्चा परिचर्चामा संवोधन भैरहने पात्र भएका छन् ।
भक्तपुर १ मा भारी मतसहित नेमकिपाका प्रेम सुवाल विजयी
भक्तपुर, मंसिर २५ – भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल ३३ हजार ७६ मतसहित विजयी हुनुभएको छ ।
सुर्खेत, मंसिर २५ – २०४८ यताका अधिकांश चुनावमा सुर्खेत कांग्रेसको गढ रह्यो । २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा २ वटै निर्वाचन कांग्रेसले जितेको थियो ।
संसद बैठकमा जानै नचाहने पनि फेरि सांसद चुनिए
सिरहा, मंसिर २५ यसअघिका संसद बैठकमा कमै मात्र उपस्थिति हुने नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरी सांसद चुनिनु भएको छ ।
पर्सा, मंसिर २५ – पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनीधि सभा सदस्यमा फोरम नेपालका हरिनारायण प्रसाद रौनियार विजयी हुनुभएको छ ।
पर्सा ४ बाट राजपाका कर्ण विजयी
पर्सा, मंसिर २५ – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पर्साको क्षेत्र नम्बर ४ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण विजयी हुनुभएको छ ।
विजयी उत्सव मनाउँन वाम गठबन्धनका शीर्ष नेता गृहजिल्लामा
काठमाडौं, मंसिर २५ – जितको उत्सव मनाउँन वाम गठबन्धनका शीर्ष नेता गृहजिल्लामा पुगेका छन् ।
प्रदीप पौडेल अन्यायमा परेकै हुन् त ?
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले फर्जी मतका कारण आफूलाई हराइएको आरोप लगाउनुुभएको छ । आफूले ३७ मतले जितिसकेको अवस्थामा ४२ वटा फर्जी मत सदर गरी ५ मतले पराजित भनेर घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता माथिकै आक्रमण भएको उहाँको आरोप छ ।
सपना साकार पार्न राम्रो नीति र व्यवहारका साथ अघि बढ्छाैं :ओली
विराटनगर, मंसिर २५ – एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्षौंदेखिका सपना साकार पार्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।
मतपेटिकामा पैसा र अर्धकट्टी सहितको मतपत्र भेटिए पछि सुनसरी ३ को मतगणना स्थगित
सुनसरी, मंसिर २५ – सुनसरी ३ को मतगणना स्थगित भएको छ । मत पेटिकामा अर्धकट्टी सहितको ९ वटा मतपत्र र २० रुपैयाँको नोट भेटिएपछि विवाद भएको छ ।
सपना साकार पार्न राम्रो नीति र व्यवहारका साथ अघि बढ्छाै‌ं : ओली